Ops အော်တိုထောက်ပံ့ကုန်, Eco-Friendly အိမ်ထောင်စုသန့်ရှင်းရေးအသေးစိတ် | ဘလော့
လီတာ ၄၀ အဝတ်လျှော်သောအရည်နှင့်အတူ ၁၀ ပိုင်းစီထိရောက်မှုရှိသောသန့်ရှင်းရေးဆေးပြားများ
သြဂုတ်လ 20, 2020 သြဂုတ်လ 20, 2020 by admin@opskar.com
ပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်သဟဇာတဖြစ်မှုနှင့်ပြတင်းပေါက်မပျက်စီးခြင်း
ဆီ၊ ဖုန်၊ ဖုန်များကိုလျင်မြန်စွာဖယ်ရှားပါ။
Wiper အရည်နှင့်ညီမျှသည့်ပိုကြီးသည့်ပိုတက်ဘလက် (၅ ဂရမ်) ။
ပေးအပ်ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုနှင့်အတူ 100% ကျေနပ်မှု။
- သင်၏ windshield မှအင်းဆက်ပိုးမွှားများ၊ ငှက်ကြမ်းများ၊ သစ်ပင်ရည်များနှင့်လမ်းဖုန်များကိုဖယ်ရှားရာတွင်အလွန်ထိရောက်သည်။ Mirror နှင့်တောက်ပနေရန်လိုအပ်သည့်မည်သည့်မျက်နှာပြင်မဆိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန်လည်း၎င်းကိုသင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ သတ္တု၊ windshield နှင့်ဖန်၊ ရာဘာ၊ ပလပ်စတစ်နှင့်ဆေးခြယ်ထားသောမျက်နှာပြင်အားလုံးအတွက်လုံခြုံမှုရှိသည်။
- ပိုမိုမြင်သာမြင်သာမှုနှင့်လုံခြုံမှုရှိစေရန်သဲလွန်စများ၊ ထို့အပြင်၎င်းတွင်မပါ ၀ င်ပါ
နှင့်အမွှေးအကြိုင် - အခမဲ့ပုံသေနည်း။ အကြွင်းအကျန်မပါဘဲနှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်ပျော်!
- ဆောင်းရာသီတွင်သန့်ရှင်းရေးစွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန်အေးခဲစေသောဆေးနှင့်ပေါင်းစပ်နိုင်သည်။ မှတ်ချက် - ဤသည်မှာနွေရာသီရေးဆွဲရေးပုံစံဖြစ်ကြောင်းသတိပြုပါ။ သင့်တင့်ကားထဲတွင်ရေခဲခြင်းမှကာကွယ်ပေးလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
- ဤကားရှေ့မှနျအဝတ်လျှော်သည့်တက်ဘလက်သည်“ ဂန္တ ၀ င်” အ ၀ တ်လျှော်အရည်ကိုဝယ်ခြင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်သင့်အားငွေများစွာသက်သာစေလိမ့်မည်။
၁၀ ရွက်ထိထိရောက်ရောက်သန့်စင်ဆေးပြားပြားများ, သင်သည် Wiper အရည်လီတာ ၄၀ ရရှိမည်။
- ရိုးရာသန့်ရှင်းရေးအရည်ကိုအစားထိုးပါ။ တက်ဘလက်သည်သမားရိုးကျဘူးများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်သယ်ယူရန်နှင့်သိုလှောင်ရန် ပို၍ အဆင်ပြေသည်။
၁။ တက်ဘလက်များကိုရေတစ်ပုလင်းထဲတွင်ဖျက်ပြီးသည်နှင့်တပြိုင်နက်အရည်ပျော်သွားပြီး၊ အိုးထဲသို့ထည့်ပြီးရေဖြည့်ပါ။
၂။ တက်ဘလက်များကိုခွဲပါသို့မဟုတ်ကြိတ်ပါ။ ၄ င်းတို့ကို windscreen အဝတ်လျှော်ရေကန်ထဲသို့လောင်းကာရေဖြည့်ပါ။
အရည်အသွေးသည်စူပါမားကတ်မှ ၅ လီတာပုလင်းတစ်လုံးအတွက်ယူရို ၄ သို့မဟုတ် ၅ ဒေါ်လာနှင့်တူသည်။
ရွာလုိ႔ရသည့္အမ်ဳိးစားမ်ား Uncategorized မှတ်ချက် Leave
သြဂုတ်လ 6, 2020 သြဂုတ်လ 6, 2020 by admin@opskar.com
ထိတွေ့မှုကင်းသောကားရေဆေးခြင်းကိုဓာတုဗေဒဆေးကြောခြင်းဟုလည်းခေါ်သည်။ ၎င်းသည်ကားကိုဆေးကြောရန်ဆိုဒီယမ် (ဖယောင်း) ကိုအသုံးပြုသည်။
စျေးကွက်တွင်ကားရေဆေးပစ္စည်းများစွာရှိပြီးကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုစီသည် ၄ ​​င်း၏တက်ကြွသောပါဝင်ပစ္စည်းများတွင်ထူးခြားသည်။
ပထမဆုံးသော OPS touchless ကားရေဆေးထုတ်ကုန်များတွင်ဆိုဒီယမ်ဂလူးကနိတ်ကဲ့သို့သောဓာတုပစ္စည်းများပါရှိသည်။
Isosteareth သည်အမှိုက်များကိုဖယ်ရှား။ ကားကိုထိရောက်စွာသန့်စင်ရန်။ ထုတ်ကုန်တွင်သဘာဝ၊ အော်ဂဲနစ်ပါဝင်ပစ္စည်းများပါ ၀ င်သည်
ရေနံနှင့်အဆိပ်မဟုတ်သောအရာများဖြစ်သည်။ နောက်ထပ်ပုံသေနည်း carnauba ဖယောင်းကနေဖန်ဆင်းတော်နှင့်လူကြိုက်များသည်
နှစ် ဦး စလုံးကြောင်းထုတ်ကုန်ပျော်မွေ့တဲ့ကားကိုပရိသတ်တွေနှင့်အတူ သန့်စင်ဆေးနှင့်ဖယောင်း နှင့်ကားတစ်စီးထွန်းလင်းစေနိုင်သည်။
ကားတစ်စီးကိုဆေးကြောရန်။ ကားထဲတွင်ပက်ဖြန်းသောအခါ, ဤအေးဂျင့်သူတို့ကိုပယ်ရှားဖို့ဖုန်မှုန်နှင့်အတူခညျြနှောငျ
စိုစွတ်စေသောနှင့်ခြောက်သွေ့သည့်အချိန်ဖယ်ရှားပစ်လိုက်သောကြောင့် OPS အပြင်ပန်းကို သုံး၍ ကားတစ်စီးလုံးကိုဆေးကြောရန်လိုအပ်သည်
အိမ်သုံးကားအဝတ်လျှော်ရေ 200 လီတာအထိအသုံးပြုသည်။ အပြင်, ရိုးရာအိမ်ကကားရေဆေးနိုင်ပါတယ်
“ အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေသောစွန့်ပစ်ပစ္စည်း” ကိုဖြစ်ပေါ်စေပါ၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အမှိုက်၊
ဤ "အစိမ်းရောင် - ဖော်ရွေ" သောအပြုသဘောဆောင်သောအကျိုးကျေးဇူးများရှိလင့်ကစား touchless ကားရေဆေးပစ္စည်းများသည်သံသယရှိသူအချို့ရှိနေသေးသည်။
အများအပြား unproven သို့မဟုတ်မသိသောပါဝင်ပစ္စည်းများဆံ့။ ဤထုတ်ကုန်များမ ၀ ယ်ခင်အကြံပြုရန်၊
သုံးစွဲသူများအနေဖြင့် ၄ င်းတို့တွင်အသုံးပြုရန်လုံခြုံမှုရှိမရှိသေချာစေရန်ထုတ်ကုန်တစ်ခုစီရှိတက်ကြွသောပါဝင်ပစ္စည်းများကိုသုတေသနပြုသင့်သည်
ဇူလိုင်လ 28, 2020 ဇူလိုင်လ 28, 2020 by admin@opskar.com
OPS ကားရှေ့မှနျအဝတ်လျှော်ပြားများသည်အစွမ်းထက်သော, ဂေဟစနစ် windscreen Wiper ကိုအာရုံစိုက်စေသည်
ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရူပါရုံကိုအာမခံပါသည်။ ရှေ့ပြတင်းပေါက်သန့်ရှင်းခန်းခြောက် Streak သို့မဟုတ်အကြွင်းအကျန်ထွက်ခွာခြင်းမရှိဘဲ.
ဤရွေ့ကား windscreen အဝတ်လျှော်တက်ဘလက်တရုတ်နိုင်ငံတွင်လုပ်ဖြစ်ကြပြီးမျှသာတော်လှန်ရေးသမားဖြစ်ကြသည်။
တင့်ကားထဲသို့တိုက်ရိုက်ထည့်သွင်းရန်ချောဆေးပြားပုံစံဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော windshield wiper
သင်၏ယာဉ်၏ကားရှေ့မှနျအဝတ်လျှော်အရည်အတွက်ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပြီး ၄.၀ လီတာထိပုတ်ပါသို့မဟုတ်ရေပုလင်းထဲသို့ထည့်သည်။
သင်၏ windshield wiper fluid တွင်ငွေပမာဏများစွာစုဆောင်းပါ။ အမှန်စင်စစ် wiper tablet တစ်ခုအသုံးပြုခြင်း
ဘုံပိုင်ရေတွင်ပါ ၀ င်သည့်အရည်သည် ၄.၀ လီတာအထိပန်ကာများ Wiper ထုတ်ကုန်ကိုအစားထိုးသည်။
သင့်ကား၏ပင်စည်ကိုဖြတ်သန်းသွားသောဗုံများအကြောင်းကိုမေ့လိုက်ပါ။ windscreen wiper pads များသည်ထိရောက်မှုရှိသည်။
၄၀ လီတာဟာ windshield wiper fluid နဲ့တူတယ်၊ ဒေါ်လာ ၂.၁၅ ပဲရတယ်။
- အတွက်: စျေးပေါပြီးထိရောက်သော။
- Feature: Ultra-concentrated, ချွေတာ။
- လုံခြုံမှု - အနည်အနှစ်များမချန်မထားရ။ သုတ်ဆေး၊ ပလတ်စတစ်နှင့်ရော်ဘာတို့အတွက်အန္တရာယ်မရှိပါ။
- ရေအမျိုးအစား: ရေပိုက်၊ တွင်းထွက်ရေ၊ သန့်စင်ထားသောရေ၊ (မြေအောက်ရေကိုမသုံးပါနှင့်) ။
- ဆန့်ကျင်: တူညီသောမော်ဒယ်တစ်နှစ်လုံးအလုပ်မလုပ်ပါဘူး
- စွမ်းရည် - စျေးကွက်ထဲတွင်ထူးခြားသော ၅ ဂရမ်တက်ဘလက်ဖြစ်သည်။ ပိုမိုအာရုံစိုက်, အစွမ်းထက်သန့်ရှင်းရေး!
Vision Tabs တက်ဘလက်တစ်ခုသည် 4L အထိစွမ်းအားရှိသော windshield washer fluid ကိုထုတ်လုပ်ရန်လုံလောက်သည်။
တက်ဘလက်များသည်အအေးခဲနေသောကြောင့်သင်၏ tank သည်0ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိကာကွယ်လိမ့်မည်။
အလွန်ချွေတာ: တစ်စည်၏စျေးနှုန်းထက်လျော့နည်းသည်ကြောင့်, ဒါဟာကုန်ကျစရိတ် 3-4 ဆကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏။
ပြီးတော့သင်ဟာ windscreen အဝတ်လျှော်လီတာများများကိုနေရာသေးသေးထဲမှာသိုလှောင်ထားနိုင်ပါတယ်။
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်စည်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းများတွင် CO2 ထုတ်လွှတ်မှုလျော့ချခြင်း။
(တက်ဘလက်များတွင်ပါ ၀ င်သည့် anti-scale ကုသမှုပါရှိသည်) ။ ၁၀ မိနစ်ခန့်အကြာတွင်ဆေးများသည်လုံးဝဖျက်သိမ်းသွားသည်
ဘေးဖယ်ကာအေးခဲအောင်လုပ်ပါသို့မဟုတ်အရက်ပါဝင်ပစ္စည်းများနှင့်အတူ Wiper အရည်ကိုသုံးပါ။
ယုံကြည်စိတ်ချရသော Windshield အဝတ်လျှော်ဆေးပြားထုတ်လုပ်သူကိုရှာဖွေသည်။ ဆက်သွယ်ရန် ကျွန်တော်တို့ကို!
ဇူလိုင်လ 23, 2020 by admin@opskar.com
ဘီး၊ ထိုင်ခုံခါးပတ်၊ ရွှေ့ပြောင်းသောအဖုနှင့်ယာဉ်မောင်း၏ဘေးတံခါးတံခါး။ သင်၏ခြေထောက်ကြားရှိ“ V”၊
သင်၏ Egg McMuffin နှင့်ကော်ဖီတို့ထွက်ပေါ်လာသည့်အခါအလွန်ညစ်ပတ်နိုင်သည်။ ဤအအစိတ်အပိုင်းများကိုနေရာချခြင်းနှင့်
ဒိုင်ခွက်နှင့်မော်တော်ယာဉ်ပြားများကိုရေနှင့်စိုစွတ်စေသောအ ၀ တ်ဖြင့်သုတ်သင့်သည်။
OPS သည်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်သည်။ ၎င်းသည်သန့်ရှင်းပြီးကားအတွင်း၌အမွှေးနံ့သာများကိုချန်ထားပြီး deodorises ပြုလုပ်သည်။
တစ်ပေါင်ချွေတာခြင်းနှင့် EPA လောင်စာစီးပွားရေးကိုတိုးမြှင့်လိုသောဆန္ဒရှိသည်
အမြဲတမ်းသင့်ရဲ့မော်တော်ယာဉ် mar သို့မဟုတ်ပျက်စီးစေနိုင်သည်။
သဘာဝနှင့်ဂေဟဗေဒဆိုင်ရာအင်ဇိုင်းဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော OPS ကားအတွင်းခန်းသန့်ရှင်းရေး၊
၎င်းကိုရောက်ရှိရန်ခက်ခဲသောဒေသများအတွက် သုံး၍ အလွန်မြန်ဆန်သော Still-free သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်နိုင်သည်။
သန့်ရှင်းရေး လမ်းဖုန်ကိုနှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်နှင့်ဖယ်ရှားပေးသည်, အင်းဆက်ပိုးမွှား, နီကိုတင်းနှင့်ဆီလီကွန်။
ပုလင်းဖြန်းရန်အမှုန့်သို့မဟုတ်အရည်ကိုအရည်။ 80: 1 ရေမှဆပ်ပြာဖြင့်စတင်ပါ။
အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်ပွတ်တိုက်။ အကယ်၍ ၎င်းအလုပ်မလုပ်ပါကသင်အောင်မြင်သည်အထိအချိုးကိုဖြည်းဖြည်းချင်းတိုးမြှင့်ပါ။
ခရီးသည်တင်ကားများ၊ 4wd များ၊ ဆိုင်ကယ်များ၏အတွင်းပိုင်းသန့်ရှင်းရေးအတွက်အသုံးပြုနိုင်သည်
အဏ္ဏဝါ & စီးပွားဖြစ်မော်တော်ယာဉ်များကဲ့သို့အိမ်သို့မဟုတ်ရုံးခန်းများတွင်။
သင်၏ကားများ၊ အိမ်များသို့မဟုတ်ရုံးခန်းများအတွက်ယူနန်ပြည်နယ်၏အခြေအနေကိုဖန်တီးလိုပါသလား။ ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ ဒီမှာ!
Touchless Car Wash ဆိုတာဘာလဲ
ဇူလိုင်လ 18, 2020 by admin@opskar.com
Touchless Car Wash ဆိုတာဘာလဲ။
အဆက်အသွယ်မရှိသောကားရေဆေးသည်ဖိအားမြင့်မားသောအဝတ်လျှော်နှင့်ဓာတုပစ္စည်းများကိုအသုံးပြုသည် ထိစရာမလိုဘဲကားတစ်စီးကိုရှင်းလင်းပါ က။
ကားတစ်စီးကားအ ၀ တ်အထည်ထဲသို့ ၀ င်သောအခါလက်ဖြင့်ဆေးကြော။ လက်ဖြင့်သုတ်ရန်မလိုအပ်ပါ။ \_ t
ကားရေဆေးခေါင်းလျှော်ရည် (သို့) ဆပ်ပြာပြင်ဆင်ပါ။ အောက်ခြေမှထိပ်သို့ကားမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်တိုက်ရိုက်ဖျန်းပါ။
လူတစ် ဦး ရွေးချယ်နိုင်သောအဆက်အသွယ်မပါသောကားရေတွင်ရွေးချယ်စရာအင်္ဂါရပ်များစွာရှိသည်
စံဟိုက်ဒရိုဂျင်အစိတ်အပိုင်းများ (pH) မှအနည်းငယ်သွေဖည်ခြင်းကယာဉ်မှဖုန်မှုန့်များကိုသက်သာစေသည်။
ထို့အပြင်ကားနှင့် ဆက်သွယ်၍ မှန်များသို့မဟုတ်အင်တင်နာများကိုပျက်စီးစေနိုင်သော roller များသို့မဟုတ်စက်မှုအပိုင်းများမရှိပါ။
ဒါ့အပြင်တစ်ဦး အဆက်အသွယ်မရှိသောကားရေဆေးသည်လျင်မြန်စွာပြီးစီးနိုင်သည်နှင့်အတူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး အဘို့အကမှန်ကန်သောရွေးချယ်မှုအောင်
OPS touchless ကားရေဆေးအမှုန့်သည်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားပြီးသန့်ရှင်းသောစွမ်းရည်ကိုဖြစ်စေနိုင်သည်
ခေါင်းလျှော်ရည်, ဆပ်ပြာ, ဆပ်ပြာ။ ရိုးရာတ ဦး တည်းကိုသတ်လိမ့်မယ်။ ပိုမိုစိတ်ဝင်စားပါသလား ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ ဒီမှာ!
ရွာလုိ႔ရသည့္အမ်ဳိးစားမ်ား Uncategorized2မှတ်ချက်
Excellent ကဇီဝသန့်ရှင်း Effervescent Tablet များ
ဘက်စုံသုံး Effervescent Cleaner
Productos မသန်စွမ်း lavado က de carros